Sidee Tamarta dhuleed u shaqeysaa: Soo saarida iyo Isticmaalka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tartanka sare iyo waxtarka weyn ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo awgood, waxay ku sii kordheysaa suuqyada caalamiga ah. Waxaa jira noocyo badan oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo (waxaan u maleynayaa inaan wada ognahay taas), laakiin xaqiiqda, dib u cusbooneysiinta, waxaan ka helnay ilo tamar badan oo "caan ah", sida qorraxda iyo dabaysha, iyo ilaha kale ee tamarta aan aadka loo aqoon sida tamarta dhulka. . Dad badan wali ma oga sida ay u shaqeyso tamarta dhuleedka.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sida ay u shaqeyso tamar-dhuleedka iyo sida ay muhiimka u tahay.
1 Tamarta tamar-dhuleed
2 Sidee Tamarta dhuleed u shaqeysaa: Soo saarid
2.1 Kaydadka biyo-dhuleedka
2.2 Kaydadka biyaha kulul
2.3 Kaydka Geyser
3 Sidee Tamarta dhulka hoostiisa u shaqeysaa: Warshad Korontada Dhulka
Kahor ogaanshaha sida tamarta dhulka hoostiisa u shaqeyso, waa inaan ogaanno waxay tahay. Tamar-dhuleedka waa isha tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo ku saleysan adeegsiga kuleylka ka jira dhulka ka hooseeya dhulka. Si kale haddii loo dhigo, waxay isticmaashaa kuleylka ka yimaada lakabyada gudaha ee dhulka waxayna ku dhalisaa tamar. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay badanaa isticmaashaa waxyaabo ka baxsan sida biyaha, hawada, iyo iftiinka qoraxda. Si kastaba ha noqotee, tamar-dhuleedka ayaa ah isha kaliya ee tamarta ee ka madaxbanaan caadadan dibadda ah.
Waxaa jira heer kul kulleed hoose oo dhulka ah halka aan ku dhaqaaqno. Si kale haddii loo dhigo, heerkulka dhulku wuu ku sii dhowaan doonaa kuna sii dhowaanayaa udub-dhexaadka dhulka markaan hoos u sii socono. Waa run oo qotoda dheer qotoda dheer ee bina aadamku gaari karo kama badna 12 km, laakiin taas waan ognahay heerkulka heerkulka ayaa kordhin doona heerkulka ciidda 2 ° C ilaa 4 ° C 100kii mitirba. Meelaha kala geddisan ee meeraha meeraha ayaa aad uga ballaaran, maxaa yeelay qolofta ayaa ku sii qulquleysa xilligan. Sidaa darteed, lakabka ugu hooseeya ee dhulka (sida gogosha ugu kulul) wuxuu ku dhow yahay dusha sare ee dhulka wuxuuna bixiyaa kuleyl badan.
Sidee Tamarta dhuleed u shaqeysaa: Soo saarid
Waxaan qori doonnaa kuwaas oo ah ilaha soo saarida si aan si fiican u fahamno sida ay u shaqeyso tamarta dhuleedka.
Qulqulka kuleylka ee meelaha qaarkood meeraha ayaa aad uga muuqda kuwa kale. Tani waxay u horseedaa waxtarka tamarta iyo abuurista awoodda iyada oo loo marayo kuleylka gudaha ee dhulka. Guud ahaan, soosaarka tamarta dhulka hoostiisa ayaa aad uga yar tan tamarta qorraxda (60 mW / m² tamarta dhulka hoostiisa iyo 340 mW / m² tamarta qorraxda). Si kastaba ha noqotee, halka wejiga heerkulka ee la soo sheegay uu ka sarreeyo (oo loo yaqaanno kayd biyo-dhuleedka), Awoodda dhalinta koronto ayaa aad uga sarreysa (illaa 200 mW / m²). Awooddan wax soo saar ee baaxadda weyn waxay soo saartaa kuleylka kuleylka, taas oo loo adeegsan karo warshadaha.
Si tamar looga soo saaro kaydadka dhulka hoostiisa ah, waa in marka hore la sameeyaa cilmi baaris macquul ah, maxaa yeelay qarashka qoditaanka ayaa si aad ah u sii kordhaya. Taasi waa, markii aan qoto dheer qodeyno, dadaalka kuleylka loogu jiidayo dusha sare ayaa sii kordhaya. Noocyada keydka cilmiga dhulka, waxaan ka helnay saddex nooc: biyo kulul, macdano qallalan iyo geys.
Kaydadka biyaha kulul
Waxaa jira laba nooc oo kayd biyood oo kulul: biyaha isha laga helo iyo biyaha dhulka hoostiisa mara. Kii hore waxaa loo isticmaali karaa qubeys kulul iyadoo wax yar lagu qaso biyo qabow si uu ugu awoodo inuu ku dhex maydho, laakiin kan hore wuxuu leeyahay dhibaatada socodkiisa oo hooseeya. Dhanka kale, waxaan leenahay biyo mareenada dhulka hoostiisa mara, kuwaas oo ah keydyo leh heerkul aad u sarreeya oo qoto dheer. Biyaha noocan ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro kuleylkaaga gudaha ah. Waxaan ku wareejin karnaa biyo kulul mashiin si aan uga faa'iideysano kuleylkiisa.
Debaajiga qalalan waa aag uu dhagaxu qalalan yahay aadna u kulul yahay. Kaydka noocan ah ma laha dheecaan qaada tamarta dhulka hoostiisa ah ama nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha la mari karo. Waa khubarada soo bandhigtay noocyadan qoddobada ah si loogu wareejiyo kuleylka. Meelahan waxay leeyihiin wax soo saar hooseeya iyo qiimaha wax soo saarka oo sareeya. Faa’iido darrada noocan ah ayaa ah in tikniyoolajiyadda iyo agabyada dhaqankan weli dhaqaale ahaan aan la dhaqmi karin, sidaa darteed waa in la horumariyo oo la hagaajiyo.
Geyser waa gu 'kulul oo si dabiici ah u soo saara tiirar uumi ah iyo biyo kulul. In yar oo meerahan ah. Xasaasiyadda jireed, geedaha waa in loo adeegsadaa jawi aad loo qiimeeyay oo taxaddar leh si aan loo yareynin waxqabadkooda wax qabad. Si looga soo saaro kuleylka dhalada geysarka, kuleylka waa in si toos ah ay u isticmaalaan marawaxadaha si loo helo firfircooni farsamo.
Dhibaatada soo saariddani waxay tahay in dib u celinta biyaha heerkulkoodu hooseeyo ay qaboojinayso magma oo ay dhammaynayso. Waxaa sidoo kale la falanqeeyay in cirbadeynta biyaha qabow iyo qaboojinta magma ay sababaan dhulgariirro yaryar oo soo noqnoqda.
Sidee Tamarta dhulka hoostiisa u shaqeysaa: Warshad Korontada Dhulka
Si aan u ogaano sida ay u shaqeyso tamarta dhulka hoostiisa ah waa inaan aadnaa dhirta tamarta dhulka hoostiisa. Waa meelaha lagu abuuro tamarta noocan ah. Hawlgalka warshad tamar-dhuleedka ayaa ku saleysan hawlgal aad u adag oo ka shaqeeya nidaam dhir-beeris. Si kale haddii loo dhigo, tamarta waxaa laga soo saaraa dhulka gudihiisa waxaana loo qaadaa geedka meesha korontada laga dhaliyo.
Wejiyada dhulka ee dhulka aad ka shaqeysid ayaa ka sarreeya kan dhulka caadiga ah. Taasi waa, heerkulka qoto dheer sii kordhaya. Aaggan oo leh wejigooda hooseeya ayaa guud ahaan u sabab ah joogitaanka biyo-mareenka ku xaddidan biyaha kulul, iyo biyo-qabatinka waxaa ilaaliya oo xaddiday lakab aan la mari karin oo xaddidaya kuleylka iyo cadaadiska oo dhan. Kani waa waxa loogu yeero keydka dhulka hoostiisa, halkaas oo kuleylka laga soo saaro si koronto looga dhaliyo.
Ceelasha soo-saarista dhulka hoostiisa ee ku xiran dhirta korantada waxay ku yaalliin aagaggan biyo-mareenka. Uumiga waxaa laga soo saaraa shabakad tuubooyin ah waxaana loo jiheeyaa warshadda halkaasoo kuleylka kuleylka ee uumiga loo beddelayo tamar farsamo ka dibna loo beddelayo tamar koronto. Marka aan helno tamarta korantada, waa inaan u rarnaa goobta isticmaalka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida tamarta dhuleedka u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamar-dhuleedka » Sida Tamarta dhulka hoostiisa u shaqeyso
5ta cunsur ee dabiiciga ah